टिप्स - नारी
प्याज तरकारी, माछामासु आदि पकाउँदा प्रयोग गरिन्छ । यसलाई सलादका रूपमा समेत खान सकिन्छ । प्याजको रस पिउँदा लुबाट जोगिन सकिन्छ । पिसाब रोकिने समस्या भएकाहरूले प्याजको रस पिउनु लाभदायक हुन्छ । काँचो प्याज खाँदा पत्थरीको समस्यामा फाइदा मिल्छ । नियमित प्याज खाँदा पाचन रस उत्पन्न हुन्छ । यसले खानेकुरा राम्रोसँग पच्छ । शरीरको कुनै अंग सुन्निए वा दुखे प्याजको रस लगाउँदा समस्या कम हुँदै जान्छ ।
स्वस्थ छातीका लागि
बालबालिकालाई इन्फ्ल्युन्जा भ्याक्सिन लगाउन सकिन्छ । यसैगरी ६५ वर्षमाथिकाले प्रत्येक १ वर्षको फरकमा इन्फ्ल्युन्जा भ्याक्सिन तथा ५ वर्षको फरकमा निमोनियाँविरुद्धको भ्याक्सिन लगाउनु प्रभावकारी हुन्छ ।
डा. प्रकाश पौडेल, वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ असार ४, २०७६
कसरी गर्ने भान्साको हेरचाह
 काठ तथा बेतबाँसका सामग्रीलाई सर्फ पानीमा चोबेको कपडा निचोरेर सुख्खा बनाएपछि मात्र सफा गर्नुपर्छ ।  किचन फर्निचरमा सकेसम्म ६–६ महिनाको अन्तरालमा तारपिनको तेल लगाउनुपर्छ जसले गर्दा कीरा लाग्दैन ।
हीरा महर्जन, जेष्ठ २९, २०७६
मेकअपसँगै पहिरनको पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । गर्मीमा गुलाबी, हरियो, सेतो आदि उज्याला रंगका पहिरन अनुकूल मानिन्छन् ।
नारी संवाददाता , जेष्ठ २०, २०७६
गर्मीमा लौकाको जुस अथवा तरकारीको रस खान सकिन्छ । लौकामा प्रशस्त पानी हुनुका साथै ग्याग्नेसियम भिटामिन ए तथा भिटामिन सी हुन्छ ।
डा. राजन गैरे , जेष्ठ १८, २०७६
घरैमा आफैं दुलही सजिन
आफ्नो छालाको प्रकृति अनुसार सुहाउंदो मेकअपको अवधारणा अगावै बनाउनु पर्छ । शुरुमा फेसवास गरी मोश्चराइजर, सनब्लक, प्राइमर लगाएर कन्सिलरको साहायताले सेप निकाल्दै फाउण्डेशन लगाइसकेपछि कम्प्याक्ट पाउडर लगाइ गुणस्तरीय ब्राण्डको ब्रसले ब्लेण्ड गर्दै जानुपर्छ । जुन काम दुलही आफैंले गर्न सक्छिन् ।
मञ्जु कार्की पाण्डे, जेष्ठ १३, २०७६
 भारी तौल उठाउनुअघि मांसपेशीलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ ।  आफ्नो शरीर बनाउन राम्रो जिम छनौट गर्नुपर्छ, जहाँ दक्ष ट्रेनरका साथ कसरत गर्न सकिन्छ ।
नारी संवाददाता , वैशाख ३०, २०७६
नारी संवाददाता , वैशाख २९, २०७६
अस्टियोपोरोसिस भएकाले के खाने ?
अस्टियोपोरोसिस (हड्डी मक्किने रोग) बाट जोगिन क्याल्सियम तथा भिटामिन डी बढी भएका खानेकुरा खानुपर्छ । यसका लागि दूध तथा दूधबाट बनेका खानेकुरा उपयुक्त हुन्छन् ।
नारी संवाददाता , वैशाख २३, २०७६
केश बढ्नु–घट्नुमा हामीले प्रयोग गर्ने स्याम्पु तथा कन्डिसनर पनि जिम्मेवार हुन्छ । प्रयोग गरिरहेको स्याम्पु तथा कन्डिसनरका कारण केश झरेको छ भने तुरुन्तै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
नारी संवाददाता , वैशाख १९, २०७६